थाहा खबर: डा. केसीले अनशन जारी राख्ने
डा. केसीले अनशन जारी राख्ने
काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विसंगतिविरुद्ध उत्रिएका डा. गोविन्द केसीले चौधौं पटकको अनशन जारी राख्ने भएका छन्। बिहीबार बिहान थाहाखबरसँग कुरा गर्दै केसीले आफूले राखेको चिकित्सा सेवा आयोगको गठनलगायत माग पूरा नभएसम्म अनशन जारी राख्ने बताएका हुन्।
उनले अदालतले शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता छानविन गर्नु भनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले पदमा बस्न नहुने बताए। ‘अदालतले छानबिनको दायरामा ल्याइसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ’, उनले भने, नत्र अदालतको अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ।'
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकताको प्रतिलिपि, शैक्षिक प्रमाणपत्र र उनको उमेर सम्बन्धमा न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउन बुधबार आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दा लागेका डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग दुई नागरिकता रहेको र एसएलसी पास नभएको आरोप लगाएका थिए। त्यस्तै डा. केसीले स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको डीन डा. शर्मालाई पुनर्बहाली गर्नु गलत भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा पक्राउ परेका चिकित्सक केसीलाई बुधबार सामान्य तारेखमा रिहाइ गरिएको थियो। सोमबार राति त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनमा बसेका बेला उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयमा फोटो खिच्दै गर्दा फोटो पत्रकार शाह पक्राउ
काठमाडौं : देश सञ्चार डट कमकी फोटो पत्रकार वर्षा शाहलाई समाचार संकलनका क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनलाई राष्ट्रपति कार्यालय श...
२२ वर्षे छोरीले चिन्दिनँ भनेपछि आमाले नै पाइनन् नागरिकता
पर्वत : आफैँले जन्म दिएकी छोरीले नै आमालाई चिन्दिनँ भनेपछि पर्वतको फलेवास नगरपालिका ४ मुडिकुवाकी महिलाले नेपाली नागरिकताको प्र...
काठमाडौं : कंचनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको पाँच महिना बित्न लाग्दासमेत हत्यारा पत्ता लाग्न सक...
जन्ती बाेकेकाे स्काेर्पियाेलाई बसले ठक्कर दिँदा ६ जनाकाे मृत्यु
काठमाडौं : दाङको लमही नगरपालिकाको रिहारमा बस र जन्ती बोकेको स्कोर्पियो एकापसमा ठोक्किँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्वपश्चिम रा...